Bileyska Puntland oo wali baaritaan ku haya labo diyaaradood oo galabta lagu qabtay Galkacyo. – Radio Daljir
Seteembar 6, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Sept – 06 – Booliska dawladda Puntland ayaa wali baaritaan ku haya labo diyaaradood oo laga leeyahay Siishalis oo maanta lagu qabtay magaalada Galkacyo, kuwaasi oo markii hore ka dagay degmada Garacad ee gobolka Mudug.
Sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Mudug ayaa goor dhaweyd u sheegey idaacadda Daljir inay in labadii diyaaradood ay fadhiyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo, laakiin sarkaalkaasi waxa uu diiday inuu ka awaabo warar sheegaya inay xabsiga dhigeen 8 qof oo la sheegay inay diyaaradahaasi la socdeen.
Labada diyaaradood ayaa la sheegey inay Garacad geeyeen dhawr iyo labaatan qof oo Burcadbadeed Somali ah oo ay ka soo qaadeen magaalada Nayroobi si ay ugu badashaan dad u dhashay jasiiradaasi oo gacanta ugu jira Burcadda badaha ee Somaliya.
Dawladda PL ayaa sheegtay inay subaxdii shir jaraa’id saxaafadda u qaban doonaan si u soo bandhigaan xogta la xiriirta qabashada diyaaradahaas iyo waxa ka qabsoomay baaritaankii ay sameeyeen.
Xukuumada Puntland oo si kulul uga jawaabtay diyaardo sharci darro ku keenay Puntland burcad badeed.
Golaha Wakiilada Somaliland oo la horgeeyay mooshin Xil-ka-xayuubin Madaxweyne. [Akhris …]